DEG DEG:-Qarax Goordhow gil-gilay dalka Afganistan | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha DibadaDEG DEG:-Qarax Goordhow gil-gilay dalka Afganistan
7th August 2019 Arimaha Dibada, Wararka Maanta 0
Ugu yaraan 95 qof ayaa ku dhaawacmay qarax Goordhow oo ka dhacay meel u dhow saldhigga boolis-ka afgaanistaan ay ku leeyihiin Caasimada Kabul.
Kooxda Taliban ayaa lagu soo waramayaa in ay sheegatay masuuliyada weerarka.
Qaraxa ayaa dhacay kadib markii gaari la istaajiyay bar koontarool oo lagu baaro gawaarida oo ku taala afaafka hore ee saldhigga bilayska, sida uu sheegay afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Nasrat Rahimi.
Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalladda, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay dadka ku dhaawacmay ay badankoodu ahaayeen dad rayid ah.
Taliban waxay sheegtey in ay ku dileen weerarkaasi tiro badan oo ay isugu jiraan askar iyo boolis.
Rabshadaha ayaa si is daba joog ah wali uga socda afgaanistaan, iyadoo Mareykanka iyo Taliban ay ka wada hadleen hashiiska nabadeed ka hor doorashooyinka la qorsheeyay in ay dhacaan Sebtember 28.